Bayaanka uu soo saaray Madaxweynaha DEMİR ee ku saabsan Weerarkii Diyaaradda F-35 Hillaac II | RayHaber | raillynews
HomeGUUDBayaanka uu soo saaray Madaxweynaha DEMİR ee ku saabsan Weerarkii Diyaaradda F-35 Hillaac II
21 / 05 / 2020 GUUD, cimilada, Headline, ISDIFAACA, TURKEY
Sharaxa ku saabsan hillaaca ii
Madaxweynaha warshadaha Difaaca Dr. İsmail DEMİR wuxuu sameeyey bayaan kusaabsan mashruuca Joint Strike F-35 Lightning II ee gudiga oo uu soo abaabulay STM ThinkTech.
Bayaanka uu soo saaray Madaxweyne DEMİR, “Ma hayno xog cad oo ku saabsan waxa ka socda Mareykanka. Si kastaba ha noqotee, waxaan aragnay horumarkii ugu dambeeyay iyo xiriir aad u diiran.
Waxa aan had iyo jeer ku nuuxnuuxsado geedi socodka F-35 waa in aan wada shaqeyn la leennahay howshan, iyo falalka mideysan ee la xiriira iskaashiga ma laha saldhig sharci ah mana ahan macquul. Ma jiro wax aasaas ah oo loogu talagalay in lagu raaco tallaabadaan S-400 marka aan tixgelinno guud ahaan qaab dhismeedka iskaashiga. Turkigu lug uma ahan go’aannada la xiriira diyaaradda laakiin wax aan la qaban iyo tan kaleba waa arin aan laga soo bixin. In kasta oo aan u nasiinay kuwa is-dhaafsadaya marar badan oo aan helin jawaab macquul ah markii aan codeyney, howsha waa la sii waday. Xitaa ereyadooda, mashruucan waxaa lagu sheegay inuu leeyahay kharash dheeraad ah ugu yaraan 500-600 milyan oo doollar. Mar labaad, sida ku xusan xisaabintayada, waxaan aragnaa qiime dheeraad ah oo ugu yaraan $ 8 illaa $ 10 milyan diyaarad kasta.
Waxaa loo sameeyay in farriin aad u cad loo siiyo Turkiga. Hawshan, waxaan soo bandhignay aragti guud oo aan had iyo jeer ku gaarno. Waxaan tusnay inaan daacad ka noqon doonno saxiixkeena. Muxuu barnaamijku u joojin doonaa howlaha wada-hawlgalayaasha ka socda Turkiga iyo in kasta oo tani ay tahay jihada loo sharraxayo taariikhda la bixiyay; Waxaan daryeelay ganacsigeenna oo fulinnay waajibaadkeenna sidii haddii hawshu ku soconeyso iyadoon wax hadal celin ah laga soo qaadin. Waxaan aragnaa faa iidada maanta jirta.
Maarj 2020 waa waqtiga kama dambeysta ah. Markay 2020 ayaa timid oo gudbay. Shirkadahayadu waxay sii wadaan waxsoosaarkooda, amarada ayaa sii socda. Marka, 'waan tuuray waxaan gooyay xarigga hal mar' oo hadda waxaan aadayaa Turkiga "ma fududa. Xitaa waxay go'aankan ka gaadheen ku biiritaanka waxsoosaarka Turkiga iskaashigan, in kasta oo saraakiisha Mareykanka ay ku amaaneen waxqabadka shirkadaha Turkiga ee deegaanno badan oo kala duwan, oo ku saabsan tayada waxsoosaarkooda, kharashaadka iyo xilliyada keenida. Maanta waxaan aragnaa taas; ku beddelashada shirkadahaan kartida leh soo-saareyaal cusub ma ahan hawl fudud, hanaankani masiibada ah ayaa tan ka sii qaatay.
Mar labaad, waxaan joognaa halka aan joogno waxaanan sii wadnaa iskaashiga wax soo saarkeena. Uma aan dhaqaaqin xakameyn ah in 'aad (Mareykanka) aad noola macaamirteen sidan oo kale, waxaan joojineynaa wax soo saarka', kama bixi doonno. Sababtoo ah haddii uu jiro heshiis iskaashi ah oo dariiq la qaaday, waxaan aaminsanahay in wada-hawlgalayaasha jidkaas ku lug lahaa inay daacadnimadan ku sii wadaan. bayaanno.
DEMİRYOLCUYUZ ururinta ururada sawirada ku saabsan NOLOSHA IYO RAILWAY
Sharaxaad ku saabsan roobab culus oo laga helay IMM! Maya adeegga tareenada
Bixinta Qalabka IMM ee Gaadiidka Maamulka ee IETT
Coronavirus Flow ilaa F-35 Hillaac II Production
Wasaaradda Gaadiidka Macluumaad ku saabsan dhaawaca shil tareen ah
Sharaxaad ka mid ah mashruuca gawaarida dhalinta ee Inebolu wuxuu ka yimid Guddoomiyaha Degmada Akthi
Gozde Inger ayaa sharraxay hindisada gawaarida waawayn
Degmada Akyazı ayaa ku dhawaaqday Khadka YHT
Degmada Akyazı oo ka tirsan laydhka ayaa u timid inay sharaxdo
TCDD waxay soo saartay bayaanka ku saabsan Hawlgalka Dekedda ee İzmir
Madaxweynaha warshadaha Difaaca
Waa kuma Engin Arık?
Waa Kuma Maskaxda?
Sharraxa Dalabka Kirada Dalxiiska ee East Express Wagon
Sharaxaad ku saabsan Mashruuca Cusub ee Cas Garage
TDDD ayaa ku dhawaaqday in markabka uu ku sii jeedo Dekada Bandirma
TCDD Ankara-Istanbul YHT oo ku taal qaybta Alifuatpaşa ee warbixinta laga sameeyey